Grenada: fampisehoana fizahan-tany Stellar 2019
Home » Lahatsoratra farany farany » Fandefasana gazety » Grenada: fampisehoana fizahan-tany Stellar 2019
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Vaovao • People • Fandefasana gazety • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Taona nahavaky rakitsoratra ho an'i Grenada, Carriacou ary Petite Martinique ny taona 2018 satria ny mpitsidika ny nosy telo dia nandray mpitsidika maherin'ny antsasaky ny tapitrisa ny morony. Miorina eo amin'ity fototra mafy orina ity, tohanan'ny fifanohizan'ny fifandraisana an-tsokosoko sy ny ezaka ara-barotra hisarihana ny mpihaino kendrena, i Grenada dia nihazona ny firoboroboan'ny firoboroboany tamin'ny taona 2019 izay niafara tamin'ny totalin'ny mpitsidika 525,453 izay navoakan'ny Grenada Tourism Authority (GTA) androany.
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika Stayover, izay heverina ho mpitsidika sarobidy indrindra amin'ny fandaniana amin'ny nosy, dia nahatratra 162,902 1, fiakarana 2018% noho ny fitomboan'ny bumper tamin'ny taona 10 (160,970%) tamin'ny 2019 tonga. Miampy ny serivisy mivantana an'ny American Airlines avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Douglas Douglas ary mihevitra fa ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto amin'ny nosy, ny Rex Grenadian, dia nakatona ho fanamboarana nanomboka ny Mey XNUMX, izany dia famantarana tsara ny fitomboan'ny toerana avo sy avo mitaky amin'ny mpandeha tsy mataho-tody.
Raha mitombo ny haben'ny tsena dia hitombo koa izany GrenadyNy portfolio misy ny trano fonenany miaraka amin'ny hotely The Royalton Grenada, kasaina hisokatra amin'ny 1 martsa 2020 ho trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto amin'ny nosy misy efitrano 269. Sandals Grenada misy efitrano 257 ary Radisson Grenada Beach Hotel misy efitrano 227 no ho hotely faharoa sy fahatelo lehibe indrindra amin'ny nosy. Ny toerana halehany dia hipetraka ao amin'ny hotely Kimpton Kawana Bay izay hanana efitrano 220 miaraka amina fananganana tsara eo amin'ny Grand Anse Beach malaza eran-tany ihany koa ary efitrano 100 no ho hita amin'ny Desambra 2020.
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika fitsangantsanganana dia nahitana 337,940 mitazona isa marobe taorian'ny fitomboan'ny firaketana an-tsoratra (2018%) tamin'ny taona 15. Efa vonona ny drafitra mba hampiakaran'ny Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) ny fitsidihan'ny antso an-tsambo miisa 342,826 amin'ny 19 ka hatramin'ny 2019 ny sambo fitsangantsanganana amin'ny taona 29 miaraka amin'ny Celebrity Cruises sy Royal Caribbean International. Ny sambo fitsangantsanganana ao Carnival Corporation dia manomana antso vaovao 2020 any Grenada mandritra ny taona 12.
Grenada dia manohy ny fitomboany lehibe amin'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fahatongavan'ireo mpitsidika voalohany 24,611 ankehitriny. Miaraka amin'ny fanitarana ny lazan'i Camper sy Nicholson mirefy 160, miaraka amin'ny 90 fanampiny vita, ny fotodrafitrasa manerantany ao Port Louis dia miomana amin'ny fitomboana lehibe eo amin'ny sehatra.
Grenada fizahantany manam-pahefanaNy Lehiben'ny mpanatanteraka, Patricia Maher, dia nanambara fa ny vinan'ny fizahantany dia tsara amin'ny toerana haleha, tsy ho an'ny taona 2020 ihany fa any ankoatra, miaraka amin'ny fanambarana ny Hotely Six Sense hisokatra amin'ny 2022. Ity tetik'asa fandraisam-bahiny misy efitrano fandraisam-bahiny miisa 100 ity dia ao anatin'ny drafitra fampandrosoana hotely roa ao La Sagesse ao amin'ny paroasy mahafinaritra an'i St. David. Io no trano fandraisam-bahiny enina Sense enina voalohany any Karaiba. Vao tsy ela akory izay dia nomena anarana hoe "Top 12 hijerena amin'ny taona 2020" io toerana io ao amin'ny Association of British Travel Agents (ABTA) Travel Trends Report 2020, ny hany tokan-toerana any Karaiba tafiditra ao amin'ny tatitra manara-penitra eran-tany nanomboka tamin'ny taona 2018.
Minisitry ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina sivily, Hon. Dr. Clarice Modeste-Curwen, dia nanamarika fa ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany ary ireo mpikambana mpiara-dia amin'ny indostria dia miandrandra drafitra fitomboana lehibe amin'ny ho avy manerana an'i Grenada, Carriacou ary Petite Martinique ka mihevitra ny fivoarana vaovao rehetra amin'ny sehatry ny stayover, sambo ary lakana.